प्रकाश टी-शर्ट गर्म मौसम मा संयोजन को एक किसिम को लागि एक सार्वभौमिक र अपरिहार्य कुरा हो। यी कुराहरू, र सुरुवाल र छोटकरीमा, र स्कर्ट, र पनि जैकेट मा राखे। ढाँचा टी-शर्ट धेरै सरल छ। त्यो अक्सर कुनै डार्ट्स छ। यो कुरा Sewed शाब्दिक एक घण्टा छ।
ढाँचा टी-शर्ट। अरू के आवश्यक छ?
त्यसैले, तपाईं पहिले नै ढाँचा टी-शर्ट छ भने, मामला अर्को लागि रहन्छ। तपाईं चित्रकला कट-बाहिर बाहेक पनि (कपडा आधारित जस्तै, पातलो बुना कपडे, प्राकृतिक रेशम, वा मखमल panne) भौतिक आवश्यक छ।
अर्को बिन्दु - पूर्वाग्रह घाँटी (बारेमा 1.10 मिटर) र edging armholes (0.54 मिटर को2टुक्रा) edging लागि डिजाइन बाध्यकारी। चौडाई लगभग4सेन्टिमिटर छ। तपाईं तयार बनाएको वस्तु खरिद गर्न सक्नुहुन्छ वा बाहिर आफ्नै उनको बनानु गर्न।
ढाँचा tops समतल हुन्छन् (एक टुक्रा जोडेको), को backrest (एक टुक्रा), अप्रत्यक्ष Beek (armholes लागि दुई टुक्रा) घाँटी edging लागि एक अप्रत्यक्ष जडना।
अब विस्तार र। ढाँचा टी-शर्ट - छ, वास्तवमा, एकदम सरल। कट र सीना को कुनै पनि संस्करण तपाईं यो कार्य सामना गर्न मदत गर्नेछ। खैर, अर्को के?
माइक (ढाँचा), पहिलो स्थानमा, अप्रत्यक्ष Bakey चित्रकला खाना पकाउने पछि आधा जोडेको प्रस्ताव र अनुहार-को अनुहार को घाँटी यो सिलाई हुनेछ। ठाउँमा गोलाई लाइन तिर एक विशेष निशान बनाउँछ। seams भत्ता आधा सेन्टिमिटरले द्वारा कटौती र टाढा फिर्ता र समतल गर्दछ। पूर्वाग्रह माथिको पालैपालो बाध्यकारी। यसको क्रस-खण्ड घाँटी बारेमा पाँच मिलिमिटरमा व्यापक गठन edging एक यस्तो तरिका मा खोलिएको छ संग त्यो बिस्तारै कीला। अगाडिबाट Otstrachivaetsya घाँटी। अर्को दोस्रो काँध सिउनी गरिन्छ। Armholes ठ्याक्कै घाँटी जस्तै प्रक्रिया। अन्त मा, तल छेउमा seams पहना। भत्ता हेम podvorachivaetsja भित्र र सेन्टिमिटर को एक दूरी मा otstrachivaetsya। तपाईं मोती वा sequins संग यो सजाउनु, टी-शर्ट को एक साँझ संस्करण बनाउन चाहनुहुन्छ भने।
सबै शैली मा निर्भर गर्दछ
अर्को तथ्य टिप्पण लायक छ। साँच्चै छैन दराज को सबै भन्दा सरल तत्व अझै पनि शर्ट छ। ढाँचा महिला जस्तो देखिने बिल्कुल सरल रेखाचित्र छ। तर, यो सबै, मुख्यतया, शैली देखि निर्भर गर्दछ। आखिर, यो उत्पादन आस्तीन वा तिनीहरूलाई बिना दुवै हुन सक्छ आसन्न छ। शर्ट लम्बाइ पनि अंतर रहन्थ्यो हुन सक्छ।
मिति, सामान्य मा वस्त्र को यो लेख वस्त्र को एक विशेष वर्गमा छ। जो को टी-शर्ट गरिएका सामाग्री, तिनीहरूलाई शीर्ष उत्पादन, पूर्ण ट्राउजर वा स्कर्ट संग पूरा, र एक समुद्र तट किरा, एक Swimsuit लगाउँथे छ जो को भाग रूपमा लगाउने अनुमति छन्।
तर, कुनै पनि अवस्थामा, कुनै कुरा के मोडेल तपाईं kroili, यो सकेसम्म सरल हुनुपर्छ। त्यो हो, ढाँचा माथि राख्न लुगा मार्फत देख्न सक्ने कुनै reliefs वा डार्ट्स हुनुपर्छ।
अब दुई आधारभूत मोडेल विचार गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो हातमा एक टी-शर्ट बनाउन भने यो उत्पादन जस्तो हुन सक्छ? ढाँचा, को पाठ्यक्रम, प्रत्येक अन्य फरक तपाईंले चयन विकल्प आधारमा।
तपाईं एक टी-शर्ट सुरु गर्न, तपाईँले, आस्तीन बिना बनाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले वरिपरि माथिल्लो bodice डार्ट्स बिना घटता कोर ढाँचा कटौती गर्न आवश्यक छ। टक मात्र पछाडि संकेत र कमर अगाडि। आधारभूत नमुनाको कमर देखि बीस सेन्टिमिटर फिर्ता औसत रेखा र अगाडि मा विस्तार गरिएको छ। को forehand र backrest रेखाहरू लम्ब को बीचमा द्वारा डाटा अंक बढाव मार्फत कोरिएका हुन्छन्। तदनुसार, यो बाहिर जान्छ हिप टी-शर्ट भविष्य रेखा।
को पार्श्व लाइन मोडेल निर्माण गर्न, यो माथिल्लो पक्ष रेखाहरू एक ठाडो लाइन आकर्षित गर्न नितम्ब तल पोइन्ट आवश्यक छ। तर armholes निर्माण गर्न र घाँटी आफ्नो "गहिराई" र काँध को चौडाई संग परिभाषित गर्नुपर्छ। काँध subsides संग टी-शर्ट खाना पकाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। एक आदर्श भेद बुना कपडे, रेशम, पातलो कपास वा तिनीहरूको कृत्रिम analogs सी छ।
र अर्को विकल्प - काँध पट्टियाँ संग टी-शर्ट। यसको निर्माण लागि मूल ढाँचा लम्बाइ को संयोजन ढाँचाको वा अनुसार उत्पादन को लम्बाइ संग मा हिप encircles। आकृति बिना डार्ट्स। अगाडि शीर्ष लाइन को आकार तपाईंको निर्णय आधारमा परिवर्तन भयो। इच्छित भने, एक जुवा संग मोडेल उपयुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। छोटो मा, आफ्नै निर्णय। हामी Camisole टी-शर्ट मात्र निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि यो तपाईं (चौडाई र आकार) मा सम्पूर्ण निर्भर गर्दछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - स्पष्ट छ, शैली परिभाषित गर्न बनाउन र माथि नियम सबै पालन गर्न चाहन्छु।
तोरी-रंग स्कर्ट: लगाउने र कसरी रंग बैंड चयन गर्न के?
ग्रिड मा मोजा: एक पूर्ण कामुकता
ठेगाना, सञ्चालनको घण्टा, समीक्षा: ओम्स्क मा पसल लुगा
बाल सदन मा PROM गर्न छोराछोरीको कपडे
परिष्कृत र मूल पोशाक कोरल रंग
सेतो Converse - दैनिक छवि लागि सही समाधान
कसरी बटवाटको साथ मासुबलहरू पकाउने: व्यंजनहरू
पत्रकार र लेखक टम Vulf: जीवनी, रचनात्मकता र रोचक तथ्य
सान Andreas, र आफ्नो सुविधाहरू
सबैभन्दा कम क्यालोरी फल, तरकारी र जामुन: सूची र सुविधाहरू